Cazzie David na Usoro Weebụ ya, Nchekasị, na enyi nwoke Pete Davidson - Ntụrụndụ
Ee, Cazzie David na -agagharị anyị niile
Na usoro ntanetị ya, Iri asatọ na isii, Nwa nwanyị Larry David echepụtala ụdị nka ọhụrụ maara onwe ya.
Foto nke Daria Kobayashi Ritch sere
ụzọ kachasị mma iji mee anal
Onye amamihe nke Iri asatọ na isii, Usoro Weebụ Cazzie David gbasara neuroses nke dijitalụ, dabere na ịmara onwe ya. Dị ka Remi, nwa agbọghọ na-agbagharị mgbe ọ gbasasịrị, onye dị afọ 23 na-eme ka ihe atọ doo anya: Remi nwere ikike. Ọ na -agbanwe. Ọ na -akpọkwa ekwentị ya mgbe niile.
Ihe niile gbasara ịbụ akụkụ nke ọgbọ ya-ọbụlagodi ngwaọrụ ọ na-eji na-eche maka onwe ya, dị ka soshal midia-na-eme ka ọ ghara inwe ntụkwasị obi, David kwuru, onye ya na onye na-ekepụta ihe bụ Elisa Kalani, na-akọwapụta usoro nri. 86edwebseries.com . Ahụkarị nghọta: n'ime Nnọọ obosara Melissa , gbasara nwa agbọghọ ahụ onye gị na ya na -emebu enyi na -eso, Remi na -arịọ ndị enyi ya ka ha bipute foto ya na oriri. Ọ bụrụ na m bulite ya, ọ na -ele anya nke ukwuu, ọ na -ebe ákwá. Ọ bụrụ na akpadoro m akara na ya, mgbe ahụ ọ maara na m pụtara mana echeghị m mkpa igosipụta ya. (Ego na-atọ ụtọ: Ezigbo ịhụnanya David, SNL Kpakpando Pete Davidson, na-egwu onye na-elegharị anya na ihe omume isii.)
Mana nke na -eju afọ karịa nlebara anya ọ hụrụ na nka nka nka mgbasa ozi na -elekọta mmadụ bụ ụzọ David, dị ka ya Kpochapụ Ịnụ ọkụ n'obi gị Pop Pop, Larry David, na -egwupụta mmetụta nke ịpụ iche maka ịchị ọchị. Papa m gwara m n'oge m dị obere na ihe m kwesịrị ime iji nwee afọ ojuju na ọ bụghị mwute na naanị m bụ ide ihe ọchị, ka ọ na-ekwu. Olileanya, ọ bụ eziokwu - ma ọ bụ aga m etinye onwe m ebe ahụ enweghị ihe kpatara ya.
Ị nwere ike ijide nkeji abụọ ikpeazụ nke Iri asatọ na isii (pụọ taa), mana ka ọ dị ugbu a, nke a bụ bajillion na otu ihe ọzọ mere o ji bụrụ puku afọ iri mmụọ gị.
Glamour: Chere, ị na -akpọ m site n'ahịrị ala?
Cazzie David: Ee.
Ụtọ: Ana m ese onyinyo gị na pajamas gị n'ihu, dị ka, bọọdụ mkpọsa, na -eri nnukwu efere ọka.
CD: Nke ahụ na -atọ ọchị. Ee e, m na -edina n'ihe ndina m ji akwa ụra nke nwere ahịrị. Ọ bụ agadi. Mana enweghị m ọrụ n'ụlọ m, yabụ enweghị m nhọrọ n'ezie.
Glamour: Agụọla m ọtụtụ akụkọ gbasara gị yana maka Iri asatọ na isii, ị na-enweta ihe niile, dị ka, ọgwụgwọ olu-nke ọgbọ, nke doro anya a Ụmụ agbọghọ ntụaka. Mana ihe m ga -achọ ịma bụ, n'ime nke gị okwu, kedu ihe echiche gị dị mkpa?
CD: Naanị m chọrọ ime ihe nwere mmetụta mbụ. Nke bụkwa ụdị ihe siri ike ime n'oge a n'ihi na, dịka, ihe niile na -adị ka emechara ya. Ọ dị m ka m na -akọwa onye na -eto eto na -eme ihe n'eziokwu, na -enwe mmetụta na -enweghị isi na -emekọrịta n'ime ụwa dijitalụ ọhụrụ a ma na -emezighị emezi na ya dị ọhụrụ. Achọrọ m ịbanye na ngalaba ọhụrụ nke puku afọ iri wee gosi ezi akụkụ nke ihe ha na -eche ihu.
Glamour: Ndị mmadụ ugbu a na -ekwu maka otu esi ekiri Ndị enyi na -enye ume ọhụrụ n'ihi na ha enweghị ekwentị. Daysbọchị ndị a, ahụrụ m onwe m nke ukwuu ịlele Insta m, m na -aga n'ụzọ okporo ụzọ na -eme ihe m na ekwentị m. Ego ole Iri asatọ na isii ọ bụ nkatọ maka etu anyị siri mebie anya?
CD: M ga -asị na ọ dị oke mkpa, mana ọ na -enwekwa ọmịiko n'otu oge ahụ. Ọ bụ ọdịdị nke abụọ. Millennials n'ezie bụ ụdị na cusp; ha biri ndụ tupu ha enwe ọganihu teknụzụ ndị a niile na soshal midia. Mgbe ahụ ọgbọ dị n'okpuru anyị amabeghị ihe ọ bụla ma ọ bụghị nke a. Yabụ na ọ nweghị ihe ha nwere ike ime. Ihe m na -ekwu bụ, ọ dị oke egwu, n'ihi na ọ bụ ihe na -ekwekọghị n'okike ka ejikọ anyị na ngwaọrụ.
elu egbugbere ọnụ laser ntutu mwepụ ego
Glamour: Ị bụ onye na-ekwu na ọ bụ onye ihere, mana ị na-ahọrọ itinye onwe gị ebe ahụ maka nyocha ọha. Nke a ọ bụ mgba maka gị? Ị tọrọ ntọala maka onwe gị dị ka akwụkwọ okwu?
CD: Echere m, ụdị ọ bụla ị wepụta onwe m ebe ahụ na -esiri m ike mgbe niile, n'ihi na enweghị m obi ike ọ bụla.
Glamour: Ekwetaghị m nke ahụ ma ọlị.
CD: Ekwere m gị nkwa. Mana enwere m ihe ndabara ọma, n'ihi na papa m chọpụtara ihe ọ dị m mkpa ime iji mezuo. Anyị abụọ na -akpachapụ anya, nke bụ àgwà na -achọkarị imegide gị, mana n'ihi na o nwere ndụ zuru oke n'ịchọpụta otu esi eji ya mee ihe maka ọdịmma ya wee mee ka ọ bụrụ ezigbo uru, enweghị m mkpa n'ezie.
Glamour: Ọ bụ ihe ọchị na ị na -ekwu maka papa gị. Ihe m na -ekwu bụ, echere m na ihe na -agba ara Kwụsị, na akara ahụ, bụ na ọ na -akwụ ụgwọ ego ya dịka dick. Mana ma eleghị anya, nke ahụ bụ naanị iji nyere aka gbachitere ịdị nkọ a?
CD: Nke ahụ bụ ụdị agwa nke, dịka, ọ bụrụ na ị ga -ekwu ihe niile [n'uche gị] nke ahụ ga -abụ ihe ị ga -ekwu. [Ọ bụrụ] na ị na -echekarị ihe ma mmadụ eme ihe na -akpasu iwe, ọ na -emetụta gị nke ukwuu. Yabụ na ọbụlagodi na ị bụghị dick, ị na -eche maka ihe ndị ahụ dick.
Glamour: Ọ nwere ihe ọ bụla ị nwere ike ịgwa m gbasara ihe ọhụrụ a?
CD: Anyị ga -ahụ na nkewa ahụ nyere Remi nnukwu ọpụpụ iji wụnye nchegbu ya niile. Yabụ, na akụkụ ndị ọzọ, anyị ga -apụ na nkewa ahụ wee hụ ka o si emeghachi omume na obere nsogbu ọ na -eche mgbe ọ dị afọ. Echere m, na mbụ, ọ dị ka ọ dị mma tupu nkewa ahụ. Mana ihe anyị na -amụta bụ na ọ na -echegbukarị onwe ya, naanị maka isiokwu ndị ọzọ - nke ka njọ.
Glamour: Nchegbu ọ bụ ihe na -adapụta na ndụ gị?
CD: Nke ahụ bụ ihe m mere ka ọ bụrụ isi okwu nke ihe nkiri a - na -ebuteghị ya nke ọma, nke m nwere mgbagwoju anya. Ma mgbe ahụ achọpụtara m na ọ bụghị n'ihi na onye ọ bụla na -eto eto na -enwe mmetụta nke enweghị ntụkwasị obi. Ọ bụ ụdị nkịtị.
Glamour: Enyi gị nwoke [ SNL kpakpando Pete Davidson] ekwupụtala nke ọma gbasara ndụ onwe ya na nsogbu onwe onye o na agba mgba. Kedu otu unu si ekpebi ihe ị ga -edebe na nzuzo yana ihe ị dị njikere isoro ndị mmadụ kerịta?
CD: Abụ m onye nzuzo karịa ya. Echeghị m na ọ ma na ị nwere ike ikwu eziokwu na ọbụghị kerịta ihe niile. Ma m na -akwanyere ya ùgwù n'ezie banyere ya. Ọzọkwa, ọ bụ onye ama ama karịa m, yabụ na ọ bụghịrị m nsogbu ugbu a.
uwe ojii ojii maka agbamakwụkwọ
echiche agba ntutu maka ntutu gbara ọchịchịrị
okpokolo agba ala